ODNOKLASSNIKI မှသင့်အကောင့်ကို UPDATE လုပ်နည်း - အတန်းဖော် - 2019
အများစုမှာ social networking site များအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့မကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောဝန်ဆောင်မှုများ, အဆင့်အတန်းနှင့်ပိုက်ဆံလက်ဆောင်တွေ၏နံပါတ်ဝယ်ယူရန်သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများကိုဆက်ကပ်။ အတန်းဖော်မပါချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သယံဇာတအတွင်းစီအသုံးပြုသူပြည်တွင်းငွေကြေးကိုတစ်ဦးကို virtual အကောင့်ရှိပါတယ် - ကိုင်ထားပါ။ ဘယ်လိုအကောင့်ဖွင့်ထိပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
Odnoklassniki အတွက်သင့်အကောင့် Refill
OCI ၌သင်တို့၏ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း၏နည်းလမ်းများစဉ်းစားပါ။ ဝယ်ယူ options များခြေချင်း၏ site Odnoklassniki ရွေးချယ်မှုဒီတော့ကိုသာအဓိကသူမြားအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးပြီး၏ခြေချင်း၏ဝယ်ယူမှုအတွက်အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲနှုန်းသည်။ တဦးတည်းရူဘယ်ဘို့တ OK ကိုမဝယ်နိုင်ပါ။ ရဲ့သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားကြပါစို့။
အဓိကဓါတ်ပုံကိုအောက်မှာလက်ဝဲကော်လံထဲမှာကို authorize ပွင့်လင်း site ကို odnoklassniki.ru, အပိုဒ်ကိုတွေ့မြင် "ဝယ် Oki"။ ဒါကကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။
လက်ဝဲကော်လံကို select လုပ်ပါအညီ "ဘဏ်ကတ်"ထိုအခါကတ်နံပါတ်, သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲနှင့် CVV / CVC အားဖြည့်ရန်အသင့်လျော်သည့်နယ်ပယ်များတွင်ရိုက်ထည့်ပါ။ ထိုအခါ button ကိုနှိပ် "ငွေပေးချေ" နှင့်စနစ်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ပေးဆောင်အခါအပိုင်း၌သင်တို့၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားကြသည်ကိုသတိပြုပါ "ကျနော့်အကြွေးကဒ်များကို".
Method ကို 2: ဖုန်းဖြင့်ငွေပေးချေမှုရမည့်
သင့်အနေဖြင့်ဖုန်းကိုကနေတဆင့်ငွေလွှဲနိုင်, လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုဆယ်လူလာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာသင့်အကောင့်ကနေနုတ်ယူလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်း, အားလုံးနီးပါးအသုံးပြုသူများကဒါမဆိုဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။
ဆိုက်အတန်းဖော်ပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုသွားပါ, စာနယ်ဇင်း "ဝယ် Oki"ငွေပေးချေမှုရမည့်အမျိုးအစားများကိုမီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ဖုန်းမှတဆင့်"။ သံကြိုး၏နံပါတ် Specify, တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကရှစ်နှင့်ပြေး button ကိုစစ်ဆင်ရေးမရှိဘဲဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ "ဟုအဆိုပါ code တွေကို Get".
သင့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်သင့်လျော်သောလိုင်းကကော်ပီကူးခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှု button ကိုပြီးအောင်, code ကိုအတူ SMS ကိုကြွလာ "Confirm".
Odnoklassniki အတွက် Zhom ကျောင်းအပ်။
Method ကို 3: ငွေပေးချေမှုရမည့် Terminator
ငွေပေးချေမှု Menu ထဲမှာ site ကိုအတန်းဖော်ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်သို့ဝင်ပါ, လိုင်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "Terminator", ကြားခံ၏အဆိုပြုစာရင်း၏အောက်ဆုံးကိုမြင်ရ, တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ လက်ျာကုမ္ပဏီရွေးချယ်ခြင်း။ ဥပမာ, "Euroset" ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော terminal ကိုစာမကျြနှာတစျဆငျ့ပေးချေမှုများအတွက် Login ။
အနီးဆုံး terminal ကိုနှင့်အတူမြေပုံဖွင့်လှစ်, ငါတို့လက်ျာဘက်ရှာ Oki ကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားပါ။
မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ငွေပေးချေမှု terminal ကိုမှရယူခြင်း, "အတန်းဖော်" အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ, သင့်ရဲ့ login ဝင်နှင့် terminal ကိုထဲသို့ပိုက်ဆံ drop ။ ယခုငါတို့သာများသောအားဖြင့်တစ်ရက်ထက်မပိုကြာကြောင်းရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းများအတွက်စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးက e-ပိုက်ဆံအိတ်ရှိပါကအလွန်အဆင်ပြေသောအအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအမျိုးမျိုးအတွက်ပြည်တွင်းငွေကြေးအတန်းဖော်များ၏ဝယ်ယူ။ ကို virtual Oka သို့ကို virtual ပိုက်ဆံ Translate ။
သင့်ရဲ့ page ကိုဖွင့်ပါ, အပေါ်ကနည်းလမ်းများနဲ့ဆင်တူသည့် OCI များအတွက်ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရာတွင်ထံသို့မရောက်ရ။ အရေအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ "E-ပိုက်ဆံ"။ ရရှိနိုင် QIWI ပိုက်ဆံအိတ်, PayPal က, Sberbank-line ကို, ကြီးသုံးမိုဘိုင်းအော်ပရေတာ, WebMoney နှင့် Yandex ငွေထဲကနေမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု။ ဥပမာ, နောက်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။
လာမယ့် window ထဲတွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အမိန့်"အဆိုပါစနစ်အ Yandex ငွေအတွက်စာမကျြနှာကိုအပြန်ညွှန်းရှိငွေပေးချေမှု password ကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့် Odnoklassniki သတိပေးမှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းဘို့စောင့်ပါ။
Method ကို 5: အဆိုပါမိုဘိုင်း application ကို
Android နှင့် iOS အတွက်ပလီကေးရှင်းမှာလည်း Oka ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထို site မျှအပြည့်အဝဗားရှင်းအဖြစ်သူတို့အဘို့အဆပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုး။
သင့်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာကို run ခြင်း, login နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်, မျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်သုံးအလျားလိုက်အစင်းနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု button ကိုနှိပ်ပါ။
အမှတ်ဆင်းစာမကျြနှာပွင့်လင်းလှန်လှော "အကောင့် Add".
သေတ္တာထဲတွင် "အမိန့် Oka" လေးရွေးချယ်စရာအကောင့်ဓာတ်အား 50, 100, 150 သို့မဟုတ် 200 OK ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်များထဲမှရွေးချယ်ပါ။ ကျနော်တို့ဥပမာ 50 ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်များ၏ဝယ်ယူကိုရွေးချယ်ပါ။
လာမယ့် tab ကိုတွင်, ခလုတ်ကိုနှိပ် "Continue".
ငွေပေးချေမှုကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိသမျှကိုဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများ: ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကို PayPal နှင့်စက်ပစ္စည်းတွင်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများမိုဘိုင်းအော်ပရေတာ။ လိုချင်သော option ကို Select လုပ်ပါနှင့်စနစ်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
သငျသညျမွငျပါပွီအဖြစ်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာနဲ့အလွယ်တကူအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့လုပ်နိုင်, Odnoklassniki အတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့။ သငျသညျကိုယျတိုငျကိုသင်တို့အဘို့အပါဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့အမြတ်အစွန်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Skype ကိုအတူ Deposit